सन्दर्भ संविधान दिवस : संविधान फेरियो तर नेताको प्रवृत्ति बद्लिएन Canada Nepal
सन्दर्भ संविधान दिवस : संविधान फेरियो तर नेताको प्रवृत्ति बद्लिएन
रामेश्वर शाह भाद्र ३१ २०७७
काठमाडौं । केही दिनयता संविधान दिवस मनाउन मोबाइल म्यासेज आइरहेको छ । सरकारले पनि दीपावली गर्दै हर्षाेल्लासका साथ संविधान दिवस मनाउन नागरिकलाई अपील गरेको छ । २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भएदेखि असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउन थालिएको छ ।
सरकारले संविधान दिवस मनाउन अपील गरिरहँदा काठमाडौंको कीर्तिपुरमा घरभाडाका विषयमा भएको विवादका क्रममा घरबेटीको आक्रमणबाट भाडावालाको मृत्यु भएको खबर पनि आयो । काठमाडौंमा मात्र होइन सप्तरी महुलीका एक दलित दम्पत्तिलाई छिमेकीले रगताम्मे हुने गरी पिटे । त्यसपछि उपचार गर्दा लागेको एक लाख ९० हजारको बीलको पैसा तिर्न नसक्दा दुई महिनादेखि उक्त दम्पत्ति उपचाररत अस्पताल मोरङको विराटनगरस्थित गोल्डेन हस्पिटलमा बन्धक बनेको समाचार पनि आइरहेको छ । पीडित उपचार खर्च बुझाउन नसकेर अस्पतालमा बन्धक बनिरहँदा पीडक तारेखमा छुटेर समाजमा सानले हिँडिरहेका छन् ।
यी प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् । यस्ता घटना टोल टोलमा निर्धा र सोझा परिवारमा प्रशस्तै भेटिन्छ । तर, संविधान बनाउँदा वा यसअघि भएका राजनीतिक संघर्षमा नेताहरुले देखाएका गुलिया आश्वासन तितो सावित भएको छ ।
जनताको पीडा कुनै शासकले सुनेन, शासक जनताको लागि होइन आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तको आर्थिक अवस्था सुधार्न लागेको छर्लङ्गै हुन्छ । अधिकांश नेताको वैधानिक आयस्रोत देखिँदैन, तर उनीहरुको जीवनशैलीले निकै राम्रो देखिन्छ । केही वर्ष अघिसम्म साइकल चढ्न नसकेका नेताहरु अहिले लाखौं मुल्यको गाडी चढ्छन् । तर, दैनिक १५ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न जनतालाई बिहान बेलुकको छाक टार्न अझै धौ धौ छ ।
यही बेला कोरोना कहरले धनी वर्गको व्यापार र आयआर्जनमा अवरोधमात्रै गर्‍यो । तर गरिब चुल्यो निभ्यो, घरभाडा तिर्न नसक्दा ज्यान गयो, उपचार खर्च तिर्न नसक्दा अस्पतालमा बन्धक हुनुपर्‍यो । यी देखिएका वा बाहिर ल्याइएका घटना हुन् । बोल्न नसक्नेहरुको पीडा समाजमा दबिएका र दबाइएका छन् ।
राणा, पञ्चायतदेखि राजतन्त्र फ्यालेर ल्याएको गणतन्त्र अनि जनताले बनाइएको भनिएको संविधानले दिएको अधिकार कहाँ कहाँ कुल्चियो, सोझासिधा जनताले बुझ्न सक्दैनन् । खर्बाैं लगानी गरेर बनाएको संविधानले जनताको चुल्हो बाल्न सकेन, नेताहरुको जीवनशैलीमा कायापलट गरिदियो ।
जनताको मुक्ति र खुसीको आवरणमा नेता र उनीहरुका सन्ततीका काँचुली फेरियो, गरिब जनतामाथि शोषण र अत्याचार हटेन । यिनै सोझासिधा जनतालाई विभिन्न आश्वासन देखिएर राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न सशस्त्र युद्धदेखि आन्दोलनसम्ममा ढाल बनाइयो । गरिबका छोराछोरी शहीद बने । धेरैको सिउँदो पुछियो, काख रित्तियो, बुढेशकालको साहरा गुम्यो, तर उनै गरिब जनताको दुःख र पीडा कहिल्यै हटेन ।
जनताको खुसीका लागि भन्दै नेताहरुले पटक पटक संविधान फेरे, संविधान संशोधन गरे । तर, राणाकालदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा शासक र नेताहरुमा जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नेदेखि उनीहरुमाथि अत्याचार रोक्न सक्ने व्यवहार देखिएन । अपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई कार्यकर्ताको भएकै आधारमा सजायमुक्त गरियो, तर उनीहरुबाट पीडित भएकाअरु उपचार खर्च बुझाउन नसकेर अस्पतालम बन्धक भए ।
संविधान फेरियो नेताका लागि, जनताको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ । संविधानका नाम फेरिए, धारा र उपधारा परिवर्तन भए । संविधान बनाउने व्यक्ति फेरिए, शासकमा नयाँ नयाँ अनुहार आए । तर, जनताको जीवनमा राणाकालदेखि गणतन्त्रकालसम्ममा कुनै परिवर्तन भएन । राणाकालमा पहुँचवालाको हालिमुहाली थियो, अहिले नेता र उनीहरुको कार्यकर्ताको छ, मात्र जनता शोषण गर्ने शैली फेरियो । नेताहरुको प्रवृत्ति फेरिएन ।
कागजको पान्नामा पाइएको अधिकारमा गर्व गर्दै भोके पेटले कसरी मनाउनु संविधान दिवस ? अन्याय र अत्यचारबाट पाएको पीडामा मल्हम लगाउन नसक्ने मुलुकभरका सिंहदरबारका आदेशहरु पालना गरेर कसरी दीपावली गर्नु ?
भाद्र ३१, २०७७ बुधवार १४:५५:४१ बजे : प्रकाशित